» कहाँबाट हेर्ने सूर्यग्रहण?
कहाँबाट हेर्ने सूर्यग्रहण?
१० पुष २०७६, बिहीबार ०६:२२
बिहीबार बिहान ८ः४२ बजेदेखि सूर्यग्रहण लाग्दै छ। तर सुरक्षित तरिकाले कहाँबाट हेर्ने सूर्यग्रहणरु सुरक्षित रूपले खण्डग्रास सूर्यग्रहण हेर्ने व्यवस्था गरेको छ, नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाईटीले।
सोसाईटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईका अनुसार नेपाली समयअनुसार बिहीबार बिहान ८ः३० देखि ११ः४५ सम्म सोसाईटीको कार्यालय सबैका लागि खुल्ला रहनेछ। सूर्यग्रहण हेर्नका लागि सोलार ग्लास र टेलिस्कोपलगायतको व्यवस्था गरिने उनी बताउँछन्। सो अवसरमा अन्तरिक्ष र खगोलसम्बन्धी जिज्ञासाका बारे अन्तरक्रिया पनि गर्न सकिने अध्यक्ष भट्टराई थप्छन्।
‘वैज्ञानिक मूल्य र मान्यता अनुसार सुरक्षित तरिकाले सुर्यग्रहण हेर्दा कुनै किसिमको हानी नोक्शानी गर्दैन,ु’उनी भन्छन्, ‘बत्तीसपुलीस्थित हाम्रो कार्यालयबाट सबैले निःशुल्क हेर्न रूपमा ग्रहण हेर्न सकिन्छ।’
सूर्यग्रहण बिहीबार बिहान ८ः४२ बजेबाट सुरु भई बिहान ११ः३१ सम्म रहनेछ। ग्रहण जम्मा २ घण्टा ४९ मिनेटसम्म रहनेछ। ग्रहणको मध्य काल बिहान १० बजेर १ मिनेटमा रहेको छ, यस बेला सूर्यको करिब ४० प्रतिशतसम्म भाग ढाकिएको देख्न सकिनेछ।